भेक्टर: एडोब इलस्ट्रेटरको नि: शुल्क वैकल्पिक | Martech Zone
भेक्टर: एडोब इलस्ट्रेटरको नि: शुल्क वैकल्पिक
बुधवार, मई 17, 2017 बुधवार, मई 17, 2017 Douglas Karr
Vectr एक स्वतन्त्र र धेरै सहज छ भेक्टर ग्राफिक्स सम्पादक वेब र डेस्कटपको लागि अनुप्रयोग। भेक्टरसँग ग्राफिक डिजाइन सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउने एकदम कम सीकेको वक्र छ। भेक्टर सदाको लागि स्वतन्त्र रहन कोश गरीएको छैन।
भेक्टर र रास्टर ग्राफिक्स बीच के भिन्नता छ?
भेक्टर-आधारित छविहरू रेखा बनाउनका लागि रेखा र मार्गहरू बनेका छन्। तिनीहरूसँग सुरूवात बिन्दु, अन्तिम पोइन्ट, र बीचको रेखाहरू छन्। तिनीहरूले भरिएका वस्तुहरू पनि सिर्जना गर्न सक्दछन्। भेक्टर छवि को फाइदा भनेको यो छ कि यसलाई पुन: आकार दिन सकिन्छ तर मूल वस्तुको सत्यता कायम राख्दछ। रास्टर-आधारित छविहरू निर्देशांकहरूमा पिक्सेलले बनेको हुन्छ। जब तपाइँ यसको मूल डिजाइनबाट रास्टर छवि विस्तार गर्नुहुन्छ, पिक्सेल विकृत हुन्छ।
एउटा तस्वीरको बिरूद्ध त्रिकोणको बारेमा सोच्नुहोस्। एक त्रिकोणमा points पोइन्ट, रेखा र बीचमा रेखा हुन सक्दछ, र रंगले भरिन्छ। जब तपाईं त्रिकोण यसको साइज दुई पटक विस्तार गर्नुहुन्छ, तपाईं केवल तीन बिन्दुहरू थप टाढा सार्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै विकृति छैन। अब एक व्यक्तिको फोटो यसको आकारको दुई पटक विस्तार गर्नुहोस्। तपाईले देख्नुहुनेछ कि फोटो धमिलो र विकृत हुनेछ किनकि कलर बिटलाई अधिक पिक्सलहरू कभर गर्न विस्तार गरियो।
यही कारणले कि चित्र र लोगोहरू जुन प्रभावकारी रूपमा पुनःआकार गर्न आवश्यक पर्दछ प्राय भेक्टरमा आधारित हुन्छन्। यसैले हामी वेबमा काम गर्ने क्रममा प्रायः धेरै ठूलो रास्टरमा आधारित छविहरू चाहान्छौं ... ताकि उनीहरूको आकार मात्र घटाइनेछ जहाँ न्यूनतम विकृति छ।
भेक्टर अनलाइन उपलब्ध छ वा तपाईं ओएसएक्स, विन्डोज, क्रोमबुक, वा लिनक्स को लागी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग एक धनी सेट छ तिनीहरूको रोडम्यापमा सुविधाहरू यो धेरै राम्रो तरीकाले यसलाई एडोब इलस्ट्रेटरको एक व्यावहारिक विकल्प बनाउन सक्दछ, एम्बेडेड संस्करणहरू सहित जुन अनलाइन सम्पादकहरूमा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
अब भेक्टर प्रयोग गर्नुहोस्!
टैग: बिट नक्शारास्टररास्टर बनाम भेक्टरसदिशभेक्टर ग्राफिक्स सम्पादकभेक्टर विरूद्ध रास्टरभेक्टर-आधारित ग्राफिक्स सम्पादकभेक्टर
भिडियो विपणन तथ्या !्क जुन तपाईंलाई थाहा छैन!
Adv फाइदा फुर्ति मार्केटिंगसँग पारम्परिक मार्केटिंग प्रक्रियाहरू छन्